भोट हाल्नुअघि मोदीले लिए आमाको आशीर्वाद, अमित शाह र राहुल गान्धीकाे भाग्य के हाेला ? « News24 : Premium News Channel
भोट हाल्नुअघि मोदीले लिए आमाको आशीर्वाद, अमित शाह र राहुल गान्धीकाे भाग्य के हाेला ?
एजेन्सी । भारतमा लोकसभाका लागि भइरहेको आम निर्वाचन अन्तरगत तेस्रो चरणको मतदान सुरु भएको छ । आज मङ्गलबारदेखि भारतका १४ राज्य तथा केन्द्रशासित स्थानमा गरी कुल ११५ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सुरु भएको बिबिसीले जनाएको छ ।
सत्ताको बागडोर हेरफेर गर्ने यो चुनाव सात चरणमा सम्पन्न हुनेछ । यसअघि दुई चरणको मतदान सकिएको छ । यी मतदानबाट अधिकांश क्षेत्रमा क्षेत्रीय दलको उपस्थिति पनि बलियो रहेको बताइन्छ ।
आज मतदान सुरु भएका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखण्ड र हरियाणाजस्ता प्रदेशमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जन परीक्षण समेत हुने ठानिएाको छ । यी क्षेत्रमा भाजपा अघिल्लो चुनावमा बलियो थियो, यसपटक भारतीय कंग्रेससँग उसको मुख्य टक्कर रहेको बताइन्छ ।
१ सय १७ लोकसभा सिटका लागि हुने आजको निर्वाचनमा गुजरात, केरला, महाराष्ट्र र कर्नाटकको ७४ सिटलाई भने महत्वपूर्ण मानिएको छ । १ सय १७ सिटका लागि १ हजार ६ सय १२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । जसमध्ये ३ सय १४ उम्मेदवार राष्ट्रिय दलबाट, ७६ जना क्षेत्रीय दलबाट, ४ सय ९२ जना गैर मान्यता प्राप्त दलबाट र ७ सय १२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।
माेदीसहित मुख्य नेताकाे भाग्य निर्धारण
यस तेस्राे चरणकाे चुनावलाई महत्वका साथ हेरिएकाे छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी, जया प्रदा र आजम खानसहितका ठूला नेताहरुको यही चरणकाे चुनावले भाग्य निर्धारण गर्दै छ ।
भाजपा अध्यक्ष शाह गुजरातको गान्धीनगरबाट चुनाव लडिरहेका छन् भने कांग्रेस अध्यक्ष गान्धी केरलाको वायनाडबाट चुनाव लडिरहेका छन् ।
आजै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि आफ्नो क्षेत्र गुजरात पुगेर मतदान गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
उनले भोट हाल्नुअघि आमालाई भेटेर आशीर्वाद लिएको बताइएको छ । आमालाई भेट्दा मोदीले पाउ ढोग्दै प्रणाम गरे । आमा हिराबेनले पनि मोदीलाई निधारमा रातो टीका लगाइदिएर विजयका लागि आशीर्वाद दिएको बताइएको छ । मोदीले आमालाई मिठार्इ खुवाउनुका साथै पछ्यौरा उपहार दिएका थिए ।
अहमदावादस्थित मतदान केन्द्रमा मोदी आफ्नी नातिनीका साथमा देखिएका थिए । सबै चरणकाे मतदानपछि मे २३ का दिन मात्रै नतिजा सार्वजनिक हुने बताइएकाे छ ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार, जुत्ता प्रहार गर्ने व्यक्ति सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा
प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको अडियो नक्कली हो भनेकोप्रति शेरबहादुर देउवाको आपत्ति
access_time 8:02 pm
access_time 7:50 pm
घनश्याम मिश्र, जनकपुर, १८ फागुन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले १५
काठमाडौं, १८ फागुन । प्राइम कलेज र सेन्ट लरेन्स कलेजले आठौं राष्ट्रव्यापी त्रिवि बीएससी सीएसआईटी
विनय तिम्सीना, इलाम, १८ फागुन । इलामको ठूलो टुँडिखेलमा जारी छैटौ संस्करणको माइभ्याली गोल्डकपको आज